पाठकको पुर्पुरो : कार्य सिद्धि होस् – २०७६ मंसिर ०३ गते मंगलबार – Rastriya Yuvajagaran News
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०७:०२01
वि.सं. २०७६ मंसिर ३ गते, मंगलबार (२०१९ नाेबेम्वर १९, मार्गशिर्षकृष्ण सप्तमी
मेषचतुर्थेश चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले जिम्मा लिएका कार्यलाई समयमै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाई खाइनेछ । चञ्चलेपनले गर्दा काम कार्य विग्रने छ । अनावश्यक कार्यमा लगानि गर्नाले पछुताउनु पर्नेछ । स्वास्थ्य समस्याले गर्दा काम गर्न सकिने छैन ।
बृषपराक्रम भावमा स्थित चन्द्रमाग्रहका बलले गर्दा सहोदरका व्यक्तिको साथ सहयोग पाइनेछ । काम गरेर आत्मसन्तोष मिल्नेछ । नयाँ कार्यको संझौता गरिनेछ । सामाजिक पदप्रतिष्ठा मिल्नेछ । साझेदारी कार्यबाट उचित लाभ पाइनेछ । हर्ष बढ्नेछ ।
मिथुननयाँ लगानि उचित नदेखिएता पनि अघि गरेको लगानिबाट भने लाभ मिल्नेछ । थोरै समयमा धेरै कार्य गर्न सकिनेछ । दैनिक कार्यमा समेत नयाँ तौर तरिकाको प्रयोगले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ । मन खुसी रहनेछ । स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नुहोला ।
कर्कटनेतृत्वदायी कार्यको जिम्मेवारी मिल्नेछ । सन्तोषी प्रवृत्ति रहनेछ । आत्मकारक ग्रहको पूर्ण रुपमा साथ मिलेकाले वाक् कलाको बृद्धि विकास हुनेछ । सहनशिलता र कृयाशिलतामा बढवा हुनेछ । मिहिनेत अनुसारको लाभ पाइनेछ । सहज वातावरण बन्नेछ ।
सिंहअरुको लहैलहैमा लाग्दा अनावश्यक खर्चभार बढ्नेछ । द्विस्वभाव युक्त सोचाइका कारण निर्णय लिन गाह्रो पर्नेछ । कठोर बोली व्यवहारका कारण आफन्तजनहरु टाढिने छन् । गलत व्यक्तिको संगतले नकारात्मक कार्यमा सरीक भइन सक्छ, सजक रहनु होला ।
कन्यानयाँ सिप सिक्न पाइनेछ । अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ । कार्य गरेर छिट्टै परिणाम आउँदा खुसी लाग्नेछ । आम्दानीका नयाँ बाटाहरु फेला पर्नेछन् । अरु दिनको तुलनामा अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । शुभ समाचार पाइनेछ ।
तुलासकारात्मक सोच आउनेछ । बन्धुवान्धवको सहयोगले कार्यको आरम्भ हुनेछ । नयाँ क्षेत्रको प्रवेश गर्ने अवसर मिल्नेछ । अघिदेखि अल्झिएका कार्यले स्थान पाउने छन् । नयाँ ठाउँको भ्रमणको योग बनेको छ । ठूला व्यक्तिसँग नजिकिने छ ।
वृश्चिकविना योजना कार्य थाल्दा अलमलमा परिनेछ । अरुको भर विश्वासमा बस्दा सामान्य कार्य पनि अपूरै रहनेछन् । जिम्मा लिएका कार्य व्यवारीसे बन्नेछ । शारीरिक आलस्यताले गर्दा कार्य गर्न सकिने छैन । सोचे अनुरुप कार्य बन्नेछैन ।
धनुआफू सही हुँदा हुँदै पनि ओलोचित भइनेछ । शारीरिक कमजोरीले छाड्ने छैन । विना सोच, तयारी निर्णय लिँदा पछि आँफैलाई समस्यामा पार्न सक्छ, सतर्क रहनु होला । प्रेमीप्रेमीका विच मनमुटावको स्थिती सृजना हुनेछ । दैनिकीमा नै व्यस्थ रहनुहोला ।
मकरअपरिचित व्यक्तिको सहयोगले कार्य बन्नेछ । अरुलाई सजिलै आकर्षित पार्न सकिनेछ । विद्वान व्यक्तिसँगको संगत रहनेछ । विश्वास दिलाउन सक्दा महत्वपूर्ण कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ । नोकरीमा प्रशंसा मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ ।
कुम्भसमान्य समस्या आएता पनि जीत तपाईँकै हुनेछ । अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष प्रगतिको योग बनेको छ । सहज वातावरण बन्नाले कार्य गर्न सजिलो हुनेछ । विवादित कार्यलाई मिलाएर अघि बढ्न सकिनेछ । स्वास्थमा सुधार हुनेछ । धन लाभ हुनेछ ।
मीनझन्झटिला कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्नेछ । योजना अनुरुप कार्य नबन्दा चिन्ता, पीरले सताउनेछ । व्यवसायबाट न्यून उपलब्धि मिल्नेछ । शंकालु प्रवृत्तिले सताउनेछ । तर परिवारका सदस्य र सन्तान पक्षको सहयोग लिएर कार्य गर्दा सफल भइनेछ ।
Related tags : Horoscope-2076 Munshir 03
यो खबर हेर्नुहोला । : "पाठकको पुर्पुरो : कार्य सिद्धि होस् – २०७६ मंसिर ०३ गते मंगलबार". यहाँ लिन्क छ : https://yuvajagaran.net/?p=20963. Thank you